HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 23-JUNE-2020
Tuesday June 23, 2020 - 10:35:04 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxtooyada oo war kasoo saartay kula nkii madaxda DF iyo dowlad goboleedyada Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulankii Shalay dhanka muuq aalka aaladda Zoom-ka ku dhex-maray ma daxda DFS iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolk
Madaxtooyada oo war kasoo saartay kula nkii madaxda DF iyo dowlad goboleedyada Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulankii Shalay dhanka muuq aalka aaladda Zoom-ka ku dhex-maray ma daxda DFS iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Hoos ka aqriso qoraalka madaxtooyada oo dhameystiran
Jamhuuriyadda FS Md. Maxamed C/hi Farmaajo oo guddoomiyey kulan hordhac u ah Shirka Amniga Qaranka oo ku qabsoo may aaladda Internetka ayaa Madaxweyne yaasha D/Goboleedyada iyo Guddoomiyaha G/Banaadir uga warbixiyey wadahadalladii Jabuuti uga furmay DFS iyo Soomaaliland.
Shirkan waxaa ka soo qeyb galay R/Wa saaraha XFS Md. Xasan Cali Khayre, R/Wa saare Kuxigeenka XFS Md. Mahdi Maxam ed Guuleed, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha G/Banaa dir,waxaana lagu heshiiyey in shirkaas ras miga ah uu degdeg u qabsoomo, iyada oo Madaxweynaha JFS uu go’aaminayo goobta iyo wakhtiga shirka.
Madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go’an tahay adkeynta wadashaq eynta DF iyo Dowlad Goboleedyada, taas oo muhiim u ah xaqiijinta yididiilada shacabka Soomaaliyeed ee dowladnimada iyo dib u soo celinta qarannimadeena.
Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo ayaa xusuusiyey Madaxda ka qeyb galay ku lankan muhiimadda wadajirka iyo in loo tana asulo danta guud, iyada oo la ilaalinayo dowl adnimadeenna oo shacabka Soomaaliyeed ay geliyeen maal iyo muruqba.
Dhankooda, Madaxda ka qeyb galay kul ankan ayaa soo bandhigay sida ay uga go’ an tahay in la sii amba qaado qorsheyaasha dowlad dhiska iyo horumarka dalka, iyaga oo wadajir u soo dhaweeyey qorshaha Mada xweynaha Jamhuuriyadda ee ku saleysan wadatashiga, is-ogolaanshaha iyo u tanaa sulka danta guud.
RW Kheyre oo kulan la qaatay Guddiga xuska maalmaha xorriyadda
R/Wasaaraha XFS Xasan Cali Kheyre ayaa kulan la qaatay Guddiga qaban-qaa bada xuska sanad guurada 60aad ee maa lmaha xorriyadda iyo midnimada ee 26-ka June iyo 1da July.
RW Kheyre ayaa guddiga ka dhageystay warbixin la xariirta hannaanka ay ugu diyaar garoobeen weyneynta munaasabadaha, iya goona sheegay in weli ay wadaan diyaar garoow ballaaran.
Sidoo kale R/Wasaaraha XFS ayaa Gud diga uga mahadceliyay dadaalka ballaaran ay wadaan, isagoo sheegay in maalmaha xo rriyadda iyo midnimada ay yihiin kuwo dadka Soomaaliyeed ay quluubtooda ku weyn tah ay. Dowladda Soomaaliya ayaa u diyaar gar awday xuska 7aadka xoriyadda 60 sano guu radii kasoo wareegtay markii layska tuuray heeryadii gumaystaha oo ka billaabanaysa 26-ka Bishan juun oo ah markii ay gobolada waqooyi xoriyadda ka qaateen gumeystihii Ingir iiska, kuna eg 1dii Luuliyo oo ah Maa linta ay Talyaaniga.
Dowladda Soomaaliya oo diiday inay jaw aab ka bixiso hadalkii xanafta lahaa ee Trump kasoo yeeray
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soo maaliya ayaa sheegtay in aysan wax faallo ah ka bixin karin dhaleeceynta madaxweyn aha Mareykanka Donald Trump uu u jeediy ay dalka xilli uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ee habeenkii Sabtida.
Madaxweyne Trump ayaa So omaaliya ku sifeeyay Wadd an Dowlad la'aan, amni la'aan ah iyo boolis la'aan, Hadalkaan ayaa qeyb ka ahaa wee rar dhanka afka ah ee uu ku qaaday xildhi baan Ilhaan Cumar oo katirsan aqalka kong arayska.
Warbaahinta BBC-da ayaa weydiisay wa saaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ha ddii ay bixnayso jawaab, laakiin waxay u she egtay in aaney xilligan diyaar u ahayn jawa abta dhalleecaynta Trump.
Ma’ahan markii ugu horreysay ee uu Tru mp ku dhawaaqo hadal xanaf leh oo ka dhan ah Soomaaliya, isagoo ku xumaynaya Ilhaan Cumar oo asalkeedu yahay Sooma ali, balse haatan ka tirsan Kongareeska Mar eykanka.Xigasho:Hiiran.Com
Duqa Muqdisho oo kulan la qaatay Gudd oomiyaha Baarlamaanka Galmudug
Guddoomiyaha GB/anaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed ay aa Xafiiskiisa kulan kula qaatay Guddoomiy aha Baarlamaanka Ga lmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal.
Guddoomiye Cumar Finish iyo Guddoom iye Gacal Nuur ayaa ka wada hadl ay hour marka ay ku tilaabsatay Caasi mada dalka sanadihii ugu dambeeyey gaar ahaan dhan ka Waddooyinka laamiga, Dayactirka dhism ooyinkii burburay ee Dawla dda, taal ooyinkii iyo astaamihii Qaranka, soo celinta Bilicda iyo Muuqaalka Caasimadda.
Guddoomiye Gacal ayaa xusay in Duqa Muqdisho uu Galmudug u balan qaaday in uu gacan wayn ka geesanayo soo celinta iyo tayeynta Hay’adaha Curdanka ah ee Dawlad
Gobaleedka Galmudug, gaar ahaan dhism aha Baarlamaanka, iyo Bilicda Caasimadda Dhuusamareeb.
"Waxa uu iiga waramay horumarka ay ku tilaabsatay Caasimadsa danadihii ugu danb eeyey dhinac kasto ha’aato, Cumar Finish ayaa u balanqaaday Galmudug in uu Gacan wayn ka geesanayo soo celinta iyo tayeynta Hay’adaha Curdanka ah ee Dawlad Gobaleedka Galmudug, gaar ahaan Dhism aha Barlamaanka, Galmudug, Qurxinta Muu qaalka iyo Bilicda Caasimadda Galmudug ee Dhusamareeb” ayuu yiri Guddoomiye Gacal.
Si kastaba Guddoomiyaha Baarlam aanka Maamulka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa ku sugan Magaalada Muqdisho, isag oona u jooga howlo shaqo.
Horjoogayaashii Al-Shabab ee dhulka xee baha, Ciise Yare iyo Xeerow oo howl gal lagu dilay
Ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee Danab iyo Gor-Gor oo si wada jir ah u ho wlgalaya ayaa Shalay Al-Shabaab kala war eegay degaanada Jilib-Marko iyo Gende rshe oo hoos taga deg mada Marka ee xarunta gobolka Sh/Hoose.
Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa saraakiisha hogaamineysa ciidamadaas waxa ay sheegeen in qorshuhu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa dhulka xeebta ee u dhaxeeya degaanka Jasi ira ee duleedka Muqdisho iyo degmada Marka.
Taliyaha guutada 16-aad ee danab G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa Idaaca d da Ciidamadda Qalabaka Sida u sheegay in ciidamadu intii ay howlgalka ku jireen ay ku dileen laba sarkaal oo Al-Shabaab u qa abil sanaa degaanada xeebta dhaca ee Sha lay ay ciidamadu la wareegeen.
Taliyahaa ayaa sidoo kale sheegay in sar aakiisha laga dilay Al-Shabaab lagu kala ma gacaabo Xeroow iyo Ciise Yare, haatana ay ku raad joogaan sarkaal kale oo lagu maga caabo Shuceyb Fanax, kaas oo kamid ah ho ggaamiyaasha sare ee Al-Shabaab u qaabi lsan dhulka xeebta ah.
Ciidamadda kumaandooska xoogga dal ka ee Danab iyo Gor-Gor ayaa haatan wax ay deegaanadii ay la wareegeen ka wadaan howlgallo baaritaano ah oo ay ku xaqijinaya an ammaanka, sida uu sheegay Taliyaha ka warbixiyey howlgalladaas.
Koonfur Afrika: Burcad dooneysay inay dhacaan Hanti ay leeyihiin Soomaali oo la xiray
Kooxo Burcad K/ Afrikan ah oo hubeysan tiro ahaana lagu sheegay ilaa 4 ayaa waxaa ay isku dayeen inay dhac u geystaan goobo Ganacsi ay leeyihiin Soomaali tuulada Ma yfiar ee M/Johannesburg, ha yeeshee waxaa la sheegay in burcadaasi la qabtay.
Kooxda Burcadda ah oo wat ay Gaari yar oo nooca raaxa da ah ayaa waxaa la sheegay in laga shakiy ay,taa soo keentay in Ganacs atada Soom aalida ah ay ku xoomaan,isla markaana ay nolosha ku qabtaan.
Wariye Cabdi Cabdi Xakiin Biif oo kamid ah Soomaalida ku nool K/Afrika ayaa soo sheegaya in qabashada Burcadaasi ay sab ab ahaayeen Soomaalida Mayfair kuwaasi oo dhawaan sameeyey (Security Team) si gaar ah ula shaqeeya Booliska iyo Laamaha Security-ga gaarka loo leeyahay ee ka jira Johannesburg. Dalka K/Afrika ayaa waxaa inta badan ko oxaha burcada ah u geystaan Soomaalida falal isugu jira,dil, iyo in mararka qaar la bo bo hantidooda
Taliye Odowaa oo ka hadlay ciidamadii Dorraad gadoodka ka sameeyey Muqdisho
Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soom aaliyeed S/guuto, Odawaa Yuusuf Raage, ayaa Shalay ka hadlay ga doodkii ay Dorraad same eyeen ciidamo ka tirsan Militariga Soomaaliya gaar ahaan qeybta 27, kuwaas oo ka cabanayey mushaar la’aan.
Taliye Odawaa ayaa sheegay in ciidan ka qalabka sida ay qaateen mushaharkoodii balse kuwa Dorraad banaanbaxa dhigay ay macquul tahay inay kamid yihiin ciidamada aan weli marin tirakoobka iyo kuwa ay cilado farsamo ka yimaadeen diwaangelintoodii oo aan weli lacag la siin sida uu hadalka u dhig ay.
"Dowladda Soomaaliya ee haatan jirta ayaa ah dowladdii ugu horreysay oo muddo labaatan sano ah si toos ah u bixisa xuqu uqda shaqaalaha rayidka iyo ciidamada kala duwan ee dalka,” ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay warbaahinta dowladda oo loo tiriy ey Odowaa.
Hadalka taliye Odawaa ayaa imaanayo xilli Dorraad ay agagaarka madaxtooyada xir teen Ciidamo ka tirsan Militariga oo kasoo baxay aaggaga difaaca ee G/Sh/Dhexe iyo G/Hiiraan maadaama sida ay hadalka u dhig een waayeen xuquuqdooda ciidanimo.
Qaar kamid ah ciidamada oo warbaahin ta la hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in muddo sanado ah ay ku jireen dafaacyada Ciidamada, iyada oo aan wax mushaar ah qaadan,hayeeshee Baarlamaanka ay ka ma qleen in Ciidamada mushaar la siiyay.
Arrintaan ayaa kusoo aadeyso xilli Mad axweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Far maajo uu mar kasta sheego in dowladiisa ay ku guuleystay bixinta mushaarka ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Q/M.oo codsatay taageero dheeri ah oo Soomaaliya looga caawiyo faafitaanka COVID-19
Wakiilka Q/Midoobay ee Soomaaliya ay aa codsaday taageero dheeri ah oo caalami ya si Soomaaliya looga caawiyo la dagaalan ka faafitaanka cudurka COVID-19.
James Swan, Wakiilka Xoghayaha Guud ee Q/M ee Soomaaliya, ayaa she egay in taageerada ay siinayaan hay'adaha caalamiga ah ay u saamaxday Soomaaliya inay bixiso tashkiilaad lagu daryeelo bukaan ada COVID-19.
"Anagoo ah saaxiibo iyo shuraako, sharaf ayey noo tahay inaan idin caawino oo aan id in garab istaagno,” ayuu Swan ku yiri baya an uu soo saaray kadib markii uu booqday Is bitaalka De Martini ee Muqdisho halkaas oo uu bogaadiyay dadaalka shaqaalaha daryeel ka caafimaadka. Ergayga QM ayaa la kulm ay shaqaalaha daryeelka caafimadka si uu ugu mahadceliyo jawaabta ugu horeeysa ee ay soomaaliya ka bixineyso gurmadka caafi maad ee dadweynaha ee COVID-19. Cusb itaalka De Martini wuxuu udub dhexaad u ya hay baaritaanka kiisaska iyo taageerada dar yeelka xasaasiga ah ee Soomaaliya. Cusbi taalku wuxuu leeyahay 71 sariiro oo karantiil ah oo loogu talagalay bukaannada COVID-19 iyo 16 hawo-mareenno, (Ventalaitor).
Sida laga soo xigtay wasaaradda caafima adka, Soomaaliya waxa ay diiwaan gelisay 2,779 kiis oo COVID-19 ah, 782 soo kaba sho ah iyo 90 dhimasho ah illaa Axaddii.
Qeyb kamid ah garoonka diyaaradaha Bu ula-Burte oo qarax lagu bur-buriyay
Qarax miino oo ah nooca dhulka lagu aaso ayaa burburiyay hoolka nasashada ee Garoonka diyaaradaha degmada Buula-bu rte ee G/Hiiraan, lamana oga cidda illaa had da sida rasmiga ah uga dembeysay qaraxa as oo aan geysan wax khasaaro nafeed ah.
Shacabka degmada Buula-burte ayaa ma qlay inta 2dan jugta qaraxaas, waxa hoolka lagu burburiyay uu ahaa mid dhowaan la dhi say, waxaana hirgeliyay Xisbiga Daldhis oo kaashanaya bulshada Gobolka Hiiraan.
"Runtii qaraxaas wuxuu ahaa wax laga naxo, waxaa la innoo sheegay in Shalay dhismihii aan sameynay miino lagu xeray, qiysaastii lacagta aan gelinnay waxay aheyd mid ku dhow $50,000 (Kunton kun) oo dol lar” ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Caddow oo la hadlay HOL. Lama oga waxyaabaha loo bur-buriyay hoolkaas, illaa iyo haddana si rasmi ah ma jiraan war kasoo baxay Maamulka Gobolka Hiiraan, kan degmada Buural-burte iyo si guud Hirshabeelleba. Xigasho:hiiraan.
Hoggaamiyahii aqlabiyadda Baarlamanka Kenya oo Shalay xil ka xayuubin lagu sameeyay
Aadan Barre Ducaale oo ahaa hoggaami yahii aqlabiyadda Baalramanka J/Kenya ay aa lagu sameeyay xil ka xayuubin , kadib ma rkii inta badan xubnaha xisbiga talada haya ee Jubilee ay kala noqdeen kalsoonida.
Xil ka xayuubinta Aadan Barre ayaa timid ka dib markii Shalay M/Nayrobi lagu qabtay kulan uu shir guddoominayay madaxweyna ha Kenya Uhuru Kenyatta.
Ducaale ayaa waayadii dembe dareemay ay culeys siyaasadeed oo xooggan tan iyo wixii ka dembeeyay markii heshiis siyaasade ed ay galeen madaxweyne Kenyatta iyo Raila Odinga .
Aadan Ducaale ayaa waxaa lagasoo doo rtaa bartamaha malaagada Gaarisa , waxa uuna Baarlamanka ka tirsanyahay muddo 12 sano ah , siddeed sano ayuu ahaa hoggaam iyaha aqlabiyadda Baarlamanka J/Kenya, ja gadaas oo ah awoodda 4aad ee dalka mar ka laga yimaado madaxweynaha, ku-xigeen ka madaxweynaha iyo G/Baarlamanka. Xilka as ayaa loo magacaabay xildhibaan Amus Kimunya oo ka tirsan isbaheysigii xisbiga isu bedalay ee Jubilee ,Xisbiga talada Kenya haya ayaa hadda u muuqda mid siyaasad ahaan sii kala foga anaya , iyadoo saaxiibb ada madaxweyne ku xigeenka Wiliam Ruto ay wajahayeen culeys xooggan sanadihii dembe.
Dhinaca kale Xildhibaan Aadan Keyna an oo lagasoo doorto deegaanka Ceel-dha as ee Ismaamulka Wajeer ayaa isagana Sha lay loo doortay xoghaya xubnaha Baarlaman ka ee xisbiga Jubilee.
Soomaalida Kenya ayaa Shalay lumisay kursi siyaasadeed oo miisaan culus, kaas oo aan xitaa la ogeyn inuu dib gacant ooda ugusoo laaban doono, wallow ay xusid mudantahay in boosas kale oo muhiim ah ay hadda hayaan, laakiin waxay u badanyihiin kuwa ku yimaado hab magacaabis ah.
Xafiiska UNSOM "Ma jirto wax xiriir ah oo QMkala dhexeeya Jaamacadda United Nations Academy of Somalia (UNAS)”
War qoraal ah oo lasoo dhigay bogga Face book-ga ee xafiiska howl-galka Q.M ee Soo maaliya UNSOM ayaa waxaa lagu sheegay inuusan jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya Jim ciyadda Qurumaha ka dhexeysa iyo Jaa macadda United Nations Academy of Somalia (UNA S). Qoraalkaan ayaa lagu sheegay inay jiraan hab ra acyo muhiim ay tahay in Ururkii doonayo in uu la shaqeeyo Q.M ama raba inuu isticma alo calaamadda sumadeed ee u gaarka ah ay maraan, Waxaana kamid ah in xiriir lala sameeyo xoghaya guud ee Q.M, ka dibna ogolaashiyo, sidaas darteed Jaamacaddaan aysan habkaas isticmaalin
”UNAS' ma codsan mana helin rukhsad ay ku isticmaasho magaca QM ama astaan ta. Oggolaansho weligiis ma siinin Xoghaya ha Guud arrin laga leeyahay u jeeddooyin ganacsi oo gaar ah, sida nooca ay ku howl gashay UNAS” ayaa lagu yiri qoraalka kusoo baxay bogga UNSOM.
Dhinaca kale waxay UNSOM qoraalkee da ku sheegtay in hab sharci ah u mari doon to in la joojiyo isticmaalka magaca QM iyo astaantaba sida ku cad warka ay sii daysay.
"Q/Midoobay ee Soomaaliya waxa ay xiriir la sameysay 'UNAS,' mas'uuliyiinta Soomaali ya iyo shabakadaha caalamiga ah oo ay qu seyso ee dhanka Internet-ka iyo hay'adaha warbaahinta bulshada oo ay ku wargalisay arrintaa ku saabsan adeegsiga aan sharciga aheyn ee magaca iyo astaanta QM, waxa ay na la beegsaneysaa dacwad sharci ah, oo ah in UNAS ay joojiso adeegsigaas” ayaa mar kale lagu sheegay qoraalka xafiiska ho wl-galka Q/M ee Soomaaliya UNSOM.
Jaamacaddan ayaa waxaa madaxdeeda ka mid ah mas’uuliyiin horay dalka ugasoo qabtay xilalka ugu sarreeyo, waxaana la eegayaa sida ay ka war-celiyaan qoraalka
kasoo baxay UNSOM.
Madaxweyne Deni: Cid kasta oo qalqal ku haysa amniga Puntland meesha lagu arko halagu toogto
Madaxweynaha D/G/Puntland Siciid C/hi Deni ayaa ku amray ciidamada amniga Punt land inay aragti ku toogtaan cid kasta oo qal qal ku haysa ammaanka iyo xasiloonida Puntland. "Cid kasta oo fal dambiyeen faraha kula jirta oo hubaysan goobteeda halagu too gto, wax maxkamad ah yaan lala sugin,” ay uu yidhi madaxweyne Deni.
Madaxweyne Deni ayaa farriin u diray ko oxda Al-shabaab ee ku jirta buuraha Galgala Calmadow, isagoo ugu baaqay inay isisoo dhiibaan haddii kale ay ciidamada ugu tegi doonaan goobahooda kuna layndo onaan.
"Waxaan u sheegaynaa Al-shabaab waq tigooda waa gabaabsi, haddii ay jirto cid deg aanadaan kasoo jeeda in ay isisoo dhiibaan, cidii aan kasoo jeedina ay isaga baxaan, wa xaan ballanqaadaynaa cidii diida in bartooda lagu toogto,” ayuu yidhi madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa caddeeyay ciidamada la tababaray inay ka shaqeyndoonaan sidii ay usoo afjari lahaa dagaalka Puntland kula jirto wuxuu ugu yeeray kooxaha argigixisada iyo xoraynta dhulka laga haysto Puntland.
Aadan Barre Ducaale oo ka hadlay xilka qaadistii lagu sameeyay
Aadan Barre Ducaale ayaa Shalay laga qaaday xilkii guddoomiyaha aqlabiyadda ba arlamaanka Kenya ee uu hayay toddobadii sano ee la soo dhaafay. Waxaa rrintan la shaaci yay ka dib kulan ay yee sheen hogaanka xisbiga talada Kenya haya ee Jubilee.
Ducaale ayaa BBC-da uga warramaya si da uu u arko xil ka qaadista lagu sameeyay, waxaa uu sheegay in culeys weyn uu hataan ka dhacay isla markaana uu diiradda saa rayo ka shaqeynta danaha shacabka soo doortay.
"Wallaahi, waxaan eersaday ma garana yi, ..madaxweynaha waa uu i amaanay, in aan shaqadeyda kasoo baxay waa uu she egay, koley waa la ogaan doonaa laakin had da waxaan ahay nin shaqadii loo dhiibay ka soo baxay”
"Waxaa weeye qaddar Ilaahey, culeys weyn ayaa iga dhacay Shalay,..weli waxaan ahay xildhibaankii dadkii sharafta badnaa ee Gaarisa Township, marka hadda waxaan u shaqeynayaa shacabkeygii oo aan xoogeygii iyo waqtigeyga ayaan siin rabaa”
Xisbiga Jubilee ee talada haya ayaa u muuqaday mid si weyn u kala qeybsamay bilihii la so dhaafay iyagoo u kala go’ay laba garab oo kala taageersan madaxweyne Ken yatta iyo garab kale oo teegeersan ku xige enkiisa Wiliam Ruto. Waxay ka dambeysay markii Kenyatta uu heshiis uusan qeyb ka ahayn Ruto la galay hoggaamiyaha Mucaa radka Raila odinga.
Booliska oo soo bandhigay Madbacado si sharci darro ah daabacaad u sameeyay
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo Shalay la hadlay Warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay sameeyeen howlgal ay kusoo qabteen madbacado si sharci daro ah u daabacayay buugaagta manhanjka wax barashada dalka ee dhawaan dowladda ay soo saartay iyo dadkii lahaa.
Waxa ay sheegeen in da abacista buugaagta ma nhajka qaranka lasiiyay hal madbacad oo tartan lagaliyay kusoo guuleysatay ayna qalad tahay in ay badiyaan madbacado aan ogolo shaasho ka ahaysan dowladda.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda waxbar ashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuuma dda federalka Soomaaliya Feysal Cumar Gu uleed ayaa waxa uu sheegay in hal mad bacad ay siiyeen ogolashada daabacaada buugaagta lana ogoleen in labadiyo laguna soo daro kuwo kale.
Waxa uu Shacabka Soomaaliyeed uga digay in ay iibsadaan buugaagta l abadiyay ee aan ahayn kuwa ay daabacday madbac adda ruqsada uheysata daabacaada cidii la gu arko, iyadoo iibinaysa ama haysatana sharciga la horgeyn dooono.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Sooma aliyeed dhame Sadiiq Aadan Cali ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen madbacadaha sida sharci da rada ah u daabacayay buugaagta manhan jka waxbarashada dalka , dadkii lahaa iyo kuwii ka shaqaynayay sharcigana lahorgayn doono.